La Taliyaha Madaxweynaha ee Arrimaha Dhaqaalaha Oo Socdaal ku Yimid Qatar | Somaliland.Org
May 27, 2011	Qatar (Somaliland.Org)-La taliyaha Madaxwaynaha ee Dhaqaalaha , Gacansiga iyo Maalgashiga Mudane Axmed Xasan Carwo ayaa socdaal shaqo oo qaatay 5 Maalmood ku yimid Magaalada Doha ee dalka Qatar isagoo ka soo kicitimay dalka Imarat- ka Carabta oo uu kulamo kala duwan la soo yeeshay Jaaliyada Somaliland ee dalkaasi ku dhaqan ka galana qayb galay debaaldegii 20 guuradii 18ka May.
Lataliyaha Madaxwaynaha Axmed Xasan Carwo intuu joogay dalka Qatar wuxuu kulamo kala gedisan la yeeshay Jaaliyada ku dhaqan dalka Qatar , Mahad naqa iyo soo dhawaynta ka sokow wuxu lataliyuhu uga xog waramay Odayaasha , aqoon yahanka iyo haweenka ku sugan dalka Qatar xaaladda guud ahaan wadankii ku sugan yahay gaar ahaan dadaalada faraha badan ee ay dawladu wado , hadday tahay adkaynta nabad galyada , dhaqaalaha , ganacsiga iyo maalgashiga. Waxuuna hoteelka uu deganaa ee Retaj Hotel kula kulmay xubno isagu jira aqoonyahano, ganacsato, iyo madaxda Jaaliyadda isagoo la yeeshay warbxin iyo aqoon-is-weydaarsi si saraaxada leysu dhaafsaday.
Axmed wax uu ku booriyey in loo baahan yahay inay sharkado samaystaan si ay qayb libaax uga qaataan maalgashiga dalka. Dalka oo dihin una baahan uun maal lagu dhaqaajiyo.Waxa kale oo uu xusuusiyey doorka jaaliyadda ka saran isku-xidhka labada dal, iyagoo ah dhammaantood ambasadooro matalaaya dalkooda hooyo.
“Xidhiidh kasta oo Somaliland dal kale la sameysatay waxa hormood ka ah qurbajooga dalkaas degan”, ayuu yidhi La-taliyaha Dhaqaalahu. Axmed Xasan Carwo waxa uu u soo jeediyay inay muwaadiniinta qurbo jooga ahi ay dhaqaalahooda isku darsadaan oo ay dalka maalgashigiisa kaga qeyb galaan warshado ay ka hirgeliyaan magaalooyinka dalka, isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Waxaan door bidiyaa inaydun idinku ka muwaadin ahaan iyo dadkeena gudaha joogaaba aydun awoodiina isku darsataan oo aad samaysataan shirkado intii shisheeye ina maalgalin lahaa. waxii se taas loo waayo waa lama huraan in la soo jiito maalgashiga shisheeye, si dalka horumar looga sameeyo..waad aragtaan oo maalgashi shisheeye dalalkii hore-umaray ayaan ka maarmin..kan aad joogtaan ayaad aragtaan inuu soo jiidanaayo maalgashi isla markaasna uu maalgashi kale ku sameynaayo dunida kale..casriga la joogaa waa mid ku salaysan xuduud furan kolka maalgashiga la eego..dunidina ay noqotay tuule la wado degan yahay.” Waxa Axmed la kulmay rag ay ka mid yihiin Aqoonyahanada Cumar Ducaale- (Cumar Laydh), Maxamed Mahdi Xuseen, Maxamed Cabdisalaan, Cabdillahi Maxamed Diiriye, Muxumad Maxamed Xasan, Cumar Muxumad Dhamac, Aadan Xuseen Cali, Maxamed M Adan, Siciid Cabdi Cilmi iyo dhalinyaro badan. Dhinaca odayaasha Qatar waxuu kala kulmay rag ay ka mid yihiin Madaxda Jaaliyada oo kale ah Cali Maxamed Yuusuf, Maxamed Cabdi Jama, Maxamed Yuusuf Maxamed, Xasan Cismaan Cajab, iyo Dubbe Aadan Dhere.
Axmed Xasan Carwo kulanka kala duwan ee uu la qaatay Jaaliyada ku dhaqan dalka Qatar wuxu kulamo kale duwan la yeeshay, shirkado ,ganacsato kala duwan oo danaynaya inay maalgashi ku samaystaan dalka Jamhuuriyada Somaliland , isagoo uga xog waramay khayraadka dihin ee dalka Jamhuuriyada Somaliland leeyahay iyo fursadaha ka banaan , balan qaadayna in dawlada Somaliland soo dhawaynayso maalgashiga dawliga ah gaar ahaan wadamada carabta isla markaana loo fududayn doono wixi dawlad ahaan iyaga ku xidhan. Waxa kale oo Axmed wada-hadal la yeeshay masúuliin rag iyo dumarba leh oo uu ka mid yahay Ku-xigeenka Maamulaha Guud ee Xidhiidka xafiiska gaarka ah ee Amiirka, iyo Xoghaynta khaaska ah ee Amiirada. Iygoo balan qaaday inay fariinta gaadhsiin doonaan xukuumadda ayna dib ula soo xidhiidh doonaan Axmed iyadoo albaabkii u horreeyey hadduun uu furmay. Kulamada Mudane Axmed Xasan Carwo la yeeshay , Ganacsatada , shirkadaha iyo Jaaliyada ku dhaqan Dalka Qatar waxay dhamaantood ku dhamaadeen guul iyo isfaham waxaana loo balamay in halka laga sii wado xidhidhka iyo wada shaqaynta.
Waxa Axmed Carwo intaanu iman Qatar soo maray Imaaradka isagoo ka qaybgalay debaaldegii 18 May ee ka dhacay Dubai. Waxuuna ka jeediyey qudbad dheer isagoo ku matalaaya Madaxweynhana hanbalyo iyo bogaadina u soo jeediyey Jaaliyadda UAE. Waxa xafladda ku weheliyey Xaji Cabdi Waraabe oo matalaayey Golayaasha Sharcidejinta iyo Cabrirahman Cabdiqaadir oo matalaayey xisbi xaakimka Kulmiye. Waxa kale oo Axmed Carwo la yeeshay waraysi dheer shabakadda Hadhwanaagnews wakiilka u jooga Imaaradka oo dhowaan la soo deyn doono. Axmed Xasan Carwo wuxu u kicitimay dalka Boqortooyada Ingiriiska halkaas oo uu u tegay hawlo shaqo oo ku sahabsan arimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga Jamhuuriyada Somaliland, xidhiidhka Jaaliyadaha iyo xukuumadda, iyo xoojinta xidhiidhka dhaqaale ee UK iyo Soomaliland. Somaliland.Org/Hargeysa office
Previous Post“Dadka qaska wadaa caruurtoodii dhul shisheeye ayay joogaan oo iskuulo ayay ku jiraan”Next PostWeftigii Wasiirka Arrimaha Dibada Oo dalka Dib Ugu Soo Laabtay	Blog